ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ပုရစ်ကောက်တဲ့ည
ပုရစ်တော့ မကောက်ဖူးတော့ မသိဘူး၊ ကောက်လည်းမကောက်ဘူး စားလည်းမစားတတ်ဘူး၊ နင့်အမေနဲ့ ငါ့အမေက သမီးယောင်းမတွေလား မသိဘူး. ခြင်မရိုက်လို့တဲ့ ငါ့အမေ ငါ့ကို ကင်မွန်းတပ်တာ၊ ဘုရားဖြစ်မယ့် အုတ်နီခဲ
ဒါနဲ့ ငါ အိုင်တော့ ပက်ဖူးသဟ. ကလေးဘ၀တုန်းက ရေးစမ်းပါ အိုင်ပက်ပုံ တူချင် တူဦးမှာ။
ခဏခဏ ကြားဖူးလို့နားယဉ်နေတဲ့ စကားလေး
ပုရစ်ကြော်တာတော့ ကြိုက်တယ်ဗျ။ ဘယ်လို ကောက်လဲတော့ မသိပါဘူး။ အခုမှပဲ ဗဟုသုတ ရတော့တယ်။ ကျေးဇူး မောင်မျိုးရေ,,, သူများတွေ ပုရစ်ကောက်တာတော့ ဘာရမလဲမသိ။ မောင်မျိုး ပုရစ်ကောက်လိုက်တာတော့ ကုသိုလ်တော်တော်ရမယ်နော်။ အမေ့ကို ခြင်ထိုင်ရမ်းပေးနေတယ် ဆိုလို့ လေ,,,,, ကောင်းပါလေ့ ကောင်းပါလေ့,,,
ပြောရရင် ပုရစ်ကို မစားရဲဘူးဟ .. ကောက်ဖို့ဆို ဝေးရောပဲ .. ငါက ပုရွက်ဆိတ်တောင် လက်နဲ့ ဖျစ်ညှစ်သတ်ရဲတာမဟုတ်ဘူး .. ရေနဲ့သာ လောင်းရင် လောင်းချတာ .. :D
ရေးပါဦး အိုင်ပက်တဲ့ အကြောင်း .. ငါမလုပ်ဘူးဘူး .. ရေးပြတော့ သိရတာပေါ့ ..း)
ငါတော့ပုရစ်မစားဖူးဘူး..။ မြင်တာနဲ့ မစားချင်ဘူး..။ မောင်မျိုးတို့ကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက အူတာ.. ဟိဟိ.. (ရတုန်းခွပ်သွားသည်)
ပုရစ်ကြော်တော့ ကြိုက်တယ်.. ကိုယ်တိုင်တော့ မကောက်ရဲဘူး.. ငယ်ငယ်တုန်းက ပုရစ်လည်းကောက်ချင်၊ ကိုယ်တိုင်လည်း မဖမ်းရဲဆိုတော့ မနက်မိုးလင်းမှ ညက သေနေတဲ့ ပုရစ်တွေ လိုက်ကောက်ရတယ်.. အိမ်မှာ ညရေးညတာဆိုပြီး အိမ်အောက်မှာ မီးထွန်းထားတော့ ပုရစ်ကျရင် ခွေးကလည်း လိုက်လိုက်ဖမ်းတယ်လေ.. အဲတော့ မနက်ကျရင် ပုရစ်အသေတွေ တော်တော်များများရတယ်.. :)
အူယားလိုက်တာ ... >>
ကျွန်တော်တော့ မကောက်ဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် ကောက်တဲ့သူတွေ နောက်တော့ လိုက်ဖူးတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။
ပုရစ်ကောက်တဲ့ အကြောင်းက ဗဟုသုတ ရလိုက်တယ် ဗျာ...၊ ကျနော်တို့ ကောက်တာကတော့ လမ်းမီးတိုင် တွေ အောက်မှာနေပြီး ကျလာတဲ့ ကောင်တွေကို လိုက်ဖမ်းတာပါပဲ၊ အခုလို တာလပတ်တွေ၊ ယိုင်ပတ် တွေနဲ့ မဖမ်းဖူးဘူး၊ စိတ်ဝင်စားစရာလည်း ကောင်း၊ ပျော်စရာလည်း ကောင်းမယ့်ပုံပဲ၊ ညီ ပုရစ်ကောက်ထွက် တာက ကလေးတွေလည်း ပျော်စေ၊ အမေလည်း ခြင်ဘေးက လွတ်စေ၊ ကိုယ်လည်း စိတ်ကူးတွေ ရွက်လွှင့်စေ ... သုံးဦးသုံးဖလှယ် အဆင်ပြေတဲ့နည်းပဲ၊
ငါ့ဟာငါ စာဖတ်ရင် ရှင်းတယ် ငမျိုးရေ.... နင့်ပုံကြည့်မှ ငါနားမလည်တော့တာ... ဟီးဟီး။
ငယ်ငယ်ကတော့ ပရစ်ကောက်ဖူးတယ်... သိတတ်စလောက် ကထည်းက ဘာကောင်မှ မဖမ်းတော့ဘူး. အဲ.. ငါးတော့မျှားဖူးတယ် ၄ ခါလောက်ပါပဲ။. အသက်ကြီးမှ မီးစက်နဲ့ချောင်းထဲ ရှော့တိုက်ဖူးတယ် တစ်ခါပဲ.. ဒါလဲ ငတ်လွန်းလို့လုပ်မိလုပ်ရာ ထလုပ်တာ.. တောထဲမှာ ၆ လလောက်နေရတော့ တောကောင် လဲ မပစ်တတ်၊ တောကောင်လာပေးတဲ့ သူကလည်း ကိုယ့်ကျ မပေး (အဲ့လိုလာဘ်နည်းတာ) ..
အဲ့သာနဲ့မီးစက်ငှားပြီး ချောင်းထဲ ဆင်း ရှော့တိုက် ပစ်တယ်... ဟီးဟီး၊ လာဟူရွာသူကြီးက သူ့ ချောင်း ကို ရှော့တိုက်လို့ဆိုပြီး ငါ့ကို စကားမပြောတာ ပြန်တဲ့ထိပဲ.. စိတ်ကောက်သွားတာလေ...
(ငါလဲ ပိုစ့်နဲ့မဆိုင်တာတွေ ချရေးနေပြန်ပါပြီ :()
ဘယ်လိုဖမ်းလဲဆိုတော့ တို့ဘက်မှာကျ ပုရစ်က မြေတွင်းထဲမှာ နေတာ အဲဒီတွင်းကို ရေလောင်းထည့်တယ်။ ရေတွေပြည့်လို့ ပုရစ်က မနေနိုင်တော့ အပြင်ထွက်လာရော အဲဒါကို မိအောင်ဖမ်းရတာ။ တို့ကတော့ မိအောင် မဖမ်းတတ်တာနဲ့ဘဲ တစ်ကောင်မှ မရတာ များတယ်.. ဘာရယ်မဟုတ် အပျော်ဖမ်းကြတာ ပြီးတော့လဲ.. မိတာက နည်းနည်းလေးဆိုတော့ ပြန်လွှတ်လိုက်ကြတာ များပါတယ်.. အများကြီးမိရင်တော့ ပြန်လွှတ်မလွှတ် မပြောတတ်း)
စာဖတ်ပြီး ပုရစ်ကောက်ပုံကို မျက်လုံးထဲကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ယောင်ပြီးသား...။
ငယ်ကတော့ ပုရစ်ကျချိန်ဆို လမ်းမီးတိုင်တွေအောက်
ကျနော်တို့ ဆီကိုလာတဲ့ပုရစ်ကျတော့ သဲပုရစ်တဲ့ဗျ...
မြစ်ရေကျတော့ သောင်ပြင်မယ်ကျတဲ့ အကောင်တွေကို ကောက်တဲ့ဟာ...
ကျနော်တို့ှဆီကျတော့ ပုရစ်က စားရလောက်အောင် မကျဘူး...အဲဒီတော့ ၀ယ်စားပေါ့...
ပုရစ်ကြော်တော့ အသေကြိုက်တယ်...ရာသီချိန်ရောက်ရင် အိမ်ကို တကူးတက ပို့ ခိုင်းရတယ်...စားချင်လာပြီ...